Ihe dị iche n'etiti igbe mgba ọkụ na igbe nkwụsị
Ngalaba ọnụ ngalaba
Ọla kọpa ọnụ
DIN-okporo ígwè ụdị njikọ ọnụ
Ike iji nweta ngọngọ Ọnụ
Arọ dị ugbu a ngọngọ
Multi-nzube ọnụ ngọngọ
Onwe-ebuli njikọ ọnụ
Nchikota ọnụ maka igbe metering
Ọnụ mgba ọkụ
Ogwe ahihia ahihia
Igbe mkpuchi mmiri
Igbe e liri mmiri na-egosi
Mkpọpu ịkpọpu Njikọ
Fire mgbochi mkpuchi ịkpọpu Njikọta
Ọnụ ngọngọ teknụzụ
A na-ezochi ahịrị eletriki dị n'ụlọ ahụ. Enwere igbe maka mgba ọkụ na ngbanwe, nke bụ igbe ngbanwe. Ọrụ nke igbe mgba ọkụ bụ ịwụnye mgba ọkụ (edozi), na nke abụọ bụ wiwi ngbanwe. Mgbe ahụ a na-akpọkwa igbe mgba ọkụ igbe nkwụsị, igbe. Ọ bụrụ na ị wụnyeghị ihe ntanetị, ntọala, ma ọ bụ mkpuchi, ị nwere ike ịkpọ igbe nkwụsị. E kwesịrị ịkọ ahịrị ahụ, tube ahụ na-agbanwekwa nke ukwuu maka mma nke eri, ọ dịkwa mkpa iji wụnye igbe nkwụsị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na igbe mgba ọkụ bụ igbe nkwụsị. N'ezie, igbe ngbanwe na igbe nkwụsị dị iche.
1. Igbe nkwụsị ahụ bụ igbe na-agafe agafe nke a ga-edozi mgbe pipeline pipeline ogologo ikpere gafere anya a kapịrị ọnụ na ọnụ ọgụgụ nke ikpere na eriri piping eletriki, a na-ekenye pipeline na ọdụ ibu. , bụ igbe ntanye, ọrụ ha bụ iji kwado eriri, nkewa na wiwi mgbanwe
Igbe mgba ọkụ, igbe nkwụnye na igbe oriọna bụ igbe ndị na-enweghị njedebe maka nrụnye atọ. Ọ bụ ntinye nke ogwe ahụ edozi mgbe ị na-etinye oghere ọkụ ọkụ na wiwi na igbe.
3. Ọ bụ ezie na igbe nkwụsị na igbe mgba ọkụ bụ nke ihe inyeaka na ọrụ ntinye eletriki, na igbe igbe dị iche nke igbe igbe igbe, ọ bụ n'ezie isi ihe na-enweghị ego, na ọnụahịa nke isi ihe dị mkpa bụrụ ndenye.
4. Ogwe nkwụsị na igbe mgba ọkụ, ma ọ bụ igbe ọla ma ọ bụ igbe PVC plastic, nke a na-eji arụ ọrụ ugbu a bụ ụdị H86, ya bụ, obosara mbara igbe ahụ bụ 86MM, igbe dị omimi bụ 50MM, 70MM.
5. Mgbe ị na-agbakọ igbe nkwụsị, igbe oriọna na igbe mkpuchi
6. A na-agbakọta igbe mgba ọkụ dịka ọnụọgụ nke eserese; a ga-ebugharị igbe nkwụsị ahụ dịka alaka ma ọ bụ ọkpọkọ nlọghachi. Mgbe ụzọ kwụ ọtọ na ọnụ ọgụgụ gbagọrọ agbagọ gafere ihe achọrọ nke nkọwapụta, a ga-agbakwunye igbe njikọ ahụ iji gbakọọ ngụkọta ahụ. Akụkụ a aghaghị ị attentiona ntị na ọnọdụ pipeline na ọnọdụ pipeline na ikpere ụkwụ maka nyocha na ngụkọta oge.
Post oge: Jul-21-2018
0086-13968745082 (Maazị Eric, Onye isi Nchịkwa)
Meghee Oge Awa:
Mọnde-Satọde09: 00-18: 00
Asụsụ Ọzọ Sitemap
Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Nkwado ndị teknuzu: